Ingono zentsimbi zentsimbi zentsimbi - China abavelisi kunye nabathengisi
"Ukunyaniseka, ukuYila, ukuQiniseka, kunye nokuSebenza ngokuNobuchule" kukuqhubeka kokuqina kwenkampani yethu kwixesha elide lokuphuhlisa kunye nabathengi ngokubuyiselana kunye nokuxhamla kwiCarbon Steel Pipe Nipples, Swivel Pipe uqinisa, Umbhobho Ukujoyina yamasango, Pipe Union Lokulinganisa, Wamkelekile ekwakheni ubudlelwane bexesha elide kunye neshishini kunye nenkampani yethu ukwenza ikamva eliqaqambileyo kunye. Ukwaneliseka kwabathengi kukusukela kwethu okungunaphakade! Sibaxhasa abathengi bethu abanokuzithengisa ngokusemgangathweni ophezulu kunye nomboneleli wenqanaba eliphezulu. Ukuba ngumvelisi oyingcali kweli candelo, ngoku sifumene ubuchwephesha obuninzi bokuvelisa kunye nokulawula iiNipple zentsimbi yeCarbon, Inkampani yethu ihlala igxila kuphuhliso lwentengiso yamanye amazwe. Sinabathengi abaninzi eRashiya, kumazwe aseYurophu, e-USA, kumazwe akuMbindi Mpuma nakumazwe aseAfrika. Sisoloko silandela loo mgangatho sisiseko ngelixa inkonzo sisiqinisekiso sokudibana nabo bonke abathengi.
Iingono zentsimbi zeCarbon zinobungakanani obuchanekileyo, indlela yokuziphatha engcono yomatshini kunye nokuqina, kwaye zisetyenziswa ngokubanzi kumbane wolwakhiwo, ukuqhubekeka, kunye nokwenza amashishini Sinikezela uluhlu olubanzi lweCarbon Steel Nipple. Kwaye yenziwe liqela lobuchwephesha kusetyenziswa ibakala lekhabhoni yentsimbi kunye noomatshini bokuqhubela phambili kwezobuchwephesha.
Isilungisi sethumbu lesinyithi seCarbon sinobungakanani obuchanekileyo, indlela yokuziphatha okungcono koomatshini kunye nokuqina, kwaye sisetyenziswa ngokubanzi kumbane wolwakhiwo, ukuqhubekeka, kunye nokwenza amashishini. Sinikeza uluhlu olubanzi lweengono zeCarbon Steel. Kwaye yenziwe liqela lobuchwephesha kusetyenziswa ibakala lekhabhoni yentsimbi kunye noomatshini bokuqhubela phambili kwezobuchwephesha.
Iingono ze-Hex ze-Stainless, Air Hose Coupling Europen Uhlobo, Isiseko, Kabini Bolt Pipe uqinisa, Izixhobo Connect izixhobo, Stainless Camlock Coupling, Iintsimbi Pipe neZilinganisi, Pipe neentsika neZilinganisi, Ingono kabini Stainless, Ingqayi ye-Stainless Barrel,
Imibhobho Stainless Stainless, Iingono zensimbi ezingenanto, Ukudibanisa uMbhobho womoya, Iingono Stainless kunye neZilinganisi, Coupling yomoya, Air Hose Coupling Europen Uhlobo,